NgoMsombuluko, Septemba 10, 2007 NgoLwesine, Juni 11, 2015 Douglas Karr
Umngane omuhle, uPat Coyle, uyabuza, Kuyini ukumaketha okusebenzisana?
I-Wikipedia inencazelo elandelayo:
Ukumaketha okusebenzisanayo kusho inkambiso eguqukayo kwezentengiso lapho ukumaketha kusuke emzameni osuselwa kuthengiselwano kuya engxoxweni. Incazelo yokumaketha okusebenzisanayo ivela kuJohn Deighton eHarvard, othi ukumaketha okusebenzisanayo kuyikhono lokukhuluma nekhasimende, khumbula lokho ikhasimende elikushoyo uphinde ukhulume nalo ngendlela ebonisa ukuthi sikhumbula lokho ikhasimende elisitshele khona (UDeighton 1996).
Ukumaketha okusebenzisana akufani nokumaketha okuku-inthanethi, yize izinqubo zokumaketha ezisebenzisanayo zenziwa lula ubuchwepheshe be-inthanethi. Ikhono lokukhumbula okushiwo yikhasimende lenziwa libe lula lapho sikwazi ukuqoqa imininingwane yamakhasimende online futhi sikwazi ukuxhumana namakhasimende ethu kalula usebenzisa ijubane le-inthanethi. I-Amazon.com iyisibonelo esihle kakhulu sokusetshenziswa kokumaketha okusebenzisanayo, njengoba amakhasimende aqopha izintandokazi zawo futhi aboniswa izinketho zebhuku ezingahambisani nezintandokazi zabo kuphela kepha nokuthengwa kwakamuva.
Ezinyangeni eziningi ezedlule, othile wangibuza ukuthi yini umehluko phakathi kokukhangisa nokumaketha. Ngiphendule ngesingathekiso sokudoba, ngifaka isicelo sokuthi ukukhangisa umcimbi noma okuphakathi, kepha ukumaketha bekuyiqhinga. Mayelana nokudoba, ngikwazi ukubamba isigxobo bese ngishaya echibini namuhla futhi ngibone ukuthi ngibambe ini. Lokho kuyikhangisa… kuphephezelisa isibungu bese sibona ukuthi ngubani olumayo. Ukumaketha, ngakolunye uhlangothi, ngumdobi oqeqeshiwe ocwaninga inhlanzi, isicupho, izinga lokushisa, isimo sezulu, isikhathi sonyaka, amanzi, ukujula, njll. Ngokuhlela nokuhlaziya, lo mdobi uyakwazi ukubamba okukhulu nokuningi inhlanzi ngokwakha isu.
Ukukhangisa kuseyingxenye yalelo su, kumane kungumcimbi onobuhlakani noma okuphakathi kwalo.
Eminyakeni edlule, kokubili ukukhangisa nokumaketha kwakungavumelani kakhulu. Umnyango wezokumaketha noma wokukhangisa usitshele ukuthi sicabangani futhi abanandaba nokuthi sizokwenzenjani. Babelawula umyalezo, okulingene, umkhiqizo nentengo. Okuwukuphela 'kwezwi' lethu bekuwukuthi sithenge umkhiqizo noma insiza noma cha.
I-IMHO, Ukusebenzisana Okumatanisayo kungukuvela kokumaketha lapho umthengi enikezwa amandla, ephathisiwe, futhi eqashwa ukusiza kuleli qhinga. Cabanga nje uma besingaba nethuba lokukhuluma nezinhlanzi bese sibona ukuthi bathanda ini yini nokuthi bangathanda ukudla nini. Mhlawumbe singaphonsa ezinye izinto ezinhle echibini ukuze bahehe abangane babo ukuthi bazodla nabo ngokuzayo. (Iningi lethu alifuni ukukhipha nokugcwalisa amakhasimende ethu - kepha uthola iphuzu.)
Asisenamandla okuphatha ngokuphelele umlayezo noma umkhiqizo wethu. Sabelana ngalolo lawulo nomthengi. Lowo mthengi, noma ngabe ikhasimende elijabule noma elithukuthele, uzosebenzisa amathuluzi afana ne-Intanethi ukutshela abangane bakhe ngolwazi lwabo ngomkhiqizo noma ngomsebenzi wakho. Njengabakhangisi, sidinga ukuqinisekisa ukuthi singaba yingxenye yaleyo ngxoxo bese sondla isimo sabo sengqondo nemibono yabo emuva ezinkampanini zethu.
Mhlawumbe ukufaniswa okuseduze kungaba ukubuyekezwa kwesisebenzi kwangaphambilini kanye ne- Ukubuyekezwa kweziqu ezingama-360 yanamuhla. Ngesinye isikhathi emisebenzini yethu, besilinda buthule ukuthola isibuyekezo sethu. Ukubuyekezwa bekuzosibeka ezingeni futhi kunikeze imigomo, izincomo nokugxeka ebesizolandisa ngakho kuze kube kubukezwa kwethu okulandelayo. Ukubuyekezwa okungu-360 kuhluke kakhulu… izinhloso, izincomo kanye nokugxekwa kuyadingidwa futhi kubhalwe kuzo zombili izinhlangothi zethebula. Ukuthuthuka nokuphumelela komsebenzi kuchazwa ngokululekwa kanye nobuholi bemenenja noma bomphathi - kodwa hhayi nje ngokuchazwa nguye.
Izinkampani zithole ukubuyekezwa okungama-360 kunenzuzo emangalisayo ngoba kusiza imenenja ukuthi ibe ngumholi ongcono futhi ibanikeze nokuqonda kokusebenza mathupha nalowo msebenzi. (Abekho abasebenzi ababili abafanayo - kufana nokuthi awekho amakhasimende amabili!). Ukumaketha okusebenzisana akuhlukile. Ngokwakha amasu afaka izwi lamakhasimende ethu futhi sikusebenzise, ​​singathuthukisa ukufinyelela kwethu kwezentengiso kakhulu.
Lapho ngikhubeka khona ku-Interactive Marketing ukuthi ngandlela thile kukhona 'iphuzu ngesikhathi' ukuthi lisebenze. Ngiyayithanda incazelo yeWikipedia ngoba ikhomba ukuthi ayidingi ukuba yi online isu. Ngikholwa ukuthi ukumaketha okusebenzisana kusetshenziswe kahle kakhulu kuma-mediums amaningi isikhathi esithile. Mina uqobo angikholwa ukuthi bekuyinto ye-Intanethi. Ngabe ucwaningo lweposi oluqondile luhluke kanjani kunenhlolovo ye-imeyili? Uma inkampani isebenzise leyo datha etholakele ukukhonza kangcono amakhasimende ayo noma ukuheha amasha, ngikholwa ukuthi lokho kusebenzisana njengenethiwekhi yokuxhumana nabantu eku-inthanethi.
Umxhasi: Faka isicelo se-Winning Elements yamaphromoshini we-imeyili angama-350,000 kokumaketha kwe-imeyili yakho ...
Futhi Buka Imiphumela Yakho Ikhuphuka Ngezinsuku Ezi-3 Nje. Chofoza lapha!
Tags: definitionukumaketha okusebenzisanaisichazamazwi
Ingabe Umsebenzi wakho Uyakusebenzela? Bangaki Abasebenzi?
Jun 6, 2009 ku-4: 47 PM
Lokhu kuyiqiniso… zimbalwa kakhulu izingosi ezisebenzisanayo. Kungakho izinkampani zibheke ezinkundleni zokuxhumana ukuxazulula lolu daba. Kuyindawo ephephile 'yesithathu'. Angikholwa ukuthi izinkampani kufanele zize zize zenze amanethiwekhi azo wokuxhumana nabantu - sikubonile lokho kwehluleka. Ngiyakholelwa ukuthi kufanele bakhe ingxoxo ekhasini labo.
Siyabonga ngokungeza kule ngxoxo!
Okthoba 7, 2013 ngo-8: 45 AM
ngithanda ukwethula ukumaketha okusebenzisana enkampanini yami. ngakho-ke uDouglas ngicela ngijabule uma ungikhombisa ukuthi ngingaqala kanjani… ..?
UJun 29, 2010 ngo-11: 37 AM
Sawubona Doug… kwisilinganiso sakho: "Ukukhangisa umcimbi noma okuphakathi, kepha ukumaketha bekuyiqhinga" singasho ukuthi ukumaketha kuyisu futhi ukukhangisa kuyisicelo sakho ?? 🙂